【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】သံဓါတျခြို့တဲ့ခွငျး ကွောငျ့ဖွဈတဲ့သှေးအားနညျးရောဂါ | Opinion Leaders
ကြှနျတျောတို့နိုငျငံရဲ့ စားသောကျပုံအရ သှေးအားနညျးရောဂါကတျောတျောအဖွဈမြားပါတယျ။သှေးအားနညျးတယျဆိုတာ သှေးထဲက ဟီမိုဂလိုဘငျ ပမာဏ နညျးတာကိုချေါတာပါ။သှေးအားနညျးရခွငျး အကွောငျးရငျးမြားစှာ ရှိပါတယျ။ ဒီထဲကမှ အပေါမြားဆုံး အကွောငျးရငျးကတော့ သံဓါတျခြို့တဲ့ခွငျး(Iron Deficiency Anaemia, IDA)ပါ။ မိနျးမတှကေ ယောကျြားတှထေကျ သံဓါတျခြို့တဲ့ နိုငျခွေ ပိုမြားပါတယျ။ ဘာလို့ဆို သူတို့က လစဉျ ရာသီသှေးဆငျးခွငျးဖွငျ့ သှေးဆုံးရှုံးမှု ရှိလို့ပါ။
သံဓါတျခြို့တဲ့ခွငျး နှငျ့ သှေးအားနညျးခွငျး ဘယျလိုဆကျစပျလဲ?
သှေးနီဥလေးတှကေို ရိုးတှငျးခွငျဆီကထုတျပေးရာမှာ လိုအပျတဲ့ ကုနျကွမျးက Fe လို့ချေါတဲ့ သံဓါတျပါ။ ဒါ​ကွောငျ့ သံဓါတျခြို့တဲ့ရငျ သှေးအားနညျးခွငျးဖွဈစပေါတယျ။ သံဓါတျခြို့တဲ့လို့ သှေးအားနညျးခွငျး (IDA) ဖွဈစတေဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေ-
(၁) Blood loss - ခန်ဓာကိုယျတ​နရောရာက​နေ သှေးဆုံးရှုံးတာမြားခွငျး
-အမြိုးသမီးမြားတှငျ ရာသီသှေးဆငျးတာမြားခွငျး (menstraution)
-အူလမျးကွောငျး တလြှောကျမှ အ​ကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ သှေးထှကျ​ခွငျး (GI bleeding) ဥပမာ- သှေးအနျခွငျး၊ ဝမျးမညျးမညျးသှားခွငျး၊ လိပျခေါငျး (piles) မှ ဝမျးထဲသှေးပါခွငျး၊ အစာအိမျအူလမျးကွောငျး ကငျဆာမြား
(၂)Poor diet-အစားအသောကျခြို့တဲ့ခွငျး (အထူးသဖွငျ့ ကလေးငယျတှမှော အာဟာရခြို့တဲ့ခွငျးနှငျ့ တှဲတတျသညျ)
-Coeliac disease လို့ချေါတဲ့ ရောဂါတမြိုးမှာ တှရေ့သညျ။ သံဓါတျပွနျဖွညျ့ပေးသျောလညျး ရရှေညျ သံဓါတျအားနညျးခွငျး နဲ့တှဲတတျပါသညျ။
(၄)Hookworm လို့ချေါတဲ့ သနျကောငျတမြိုးကွောငျ့ အူလမျးကွောငျးမှ သှေးဆုံးရှုံးခွငျး တို့ဖွဈပါတယျ။
သာမနျထကျ ဖွူ ဖြော့နခွေငျး၊ နုံးခွငျး၊ မောခွငျး၊ ခေါငျးမူးခွငျး ရိပျကနဲဖွဈခွငျး၊ ရငျတုနျခွငျး၊ အစားအသောကျပကျြခွငျး စတာတှနေဲ့ တှရေ့မှာပါ။ လကွာရှညျစှာ သံဓါတျအားနညျးနတေဲ့သူတှမှောတော့ အပျေါမှာပွောတဲ့ သှေးအားနညျးတဲ့ လက်ခဏာတှအေပွငျ ​ကွာရှညျ သံဓါတျခြို့တဲ့လက်ခဏာတှဖွေဈတဲ့-
-လကျသညျး ခွသေညျး ပုံပကျြခွငျး (Koilonychia)
-နှုတျခမျးထောငျ့တှငျ အနာဖွဈခွငျး (Angular cheilosis)
-လြှာရဲယံရောငျရမျးခွငျး (Atrophic glossitis) နှငျ့
-လညျခြောငျးတှငျ ပိတျဆို့ခွငျး အစာနငျခွငျး ဖွဈစတေဲ့ post cricoid web ဒါတှနေဲ့လညျး တှဲတှရေ့မှာပါ။
သငျ့မှာ သှေးအားနညျးနကွေောငျး ဘယျလိုစဈဆေးသိနိုငျမလဲ?
Full Blood Count သှေးဆဲလျ ပမာဏ စဈကွညျ့ခွငျးဖွငျ့ Hb လို့ချေါတဲ့ ဟီမိုဂလိုဘငျ % နညျးနခွေငျးဖွငျ့ သိနိုငျပါတယျ။
အမြိုးသားတှမှောတော့ ဟီမိုဂလိုဘငျ ပမာဏ 13.5 g/dL အောကျ နဲ့ အမြိုးသမီးတှမှော 11.5g/dL အောကျ ရှိရငျ သှေးအားနညျးခွငျး (Anaemia) လို့သတျမှတျနိုငျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ သံဓါတျခြို့တဲ့ခွငျးအတှကျ Fe study လို့ချေါတဲ့ စဈဆေးမှုတခု လုပျနိုငျပါတယျ။
သငျ့မှာ သံဓါတျခြို့တဲ့မှုကွောငျ့ သှေးအားနညျးနတော သိတာနဲ့ ဘာကွောငျ့ဖွဈရလဲ အကွောငျးရငျးတှသေိဖို့ ရှာသငျ့ပါတယျ။
-လိပျခေါငျး ရှိ/မရှိ စဈဆေးခွငျး
-အူမကွီး မှနျပွောငျးကွညျ့ခွငျး (Colonoscopy)
-ဝမျးစဈခွငျး (Stool microscopy for ova) စတာတှေ ရှာသငျ့ပါတယျ။
သံဓါတျခြို့တဲ့ခွငျးကို ဖွဈစတေဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေို အရငျရှာဖှကေုသရမှာပါ။ သံဓါတျပွနျလညျဖွညျ့တငျးဖို့ကတော့ ပါးစပျကနပေဲ သံဓါတျသောကျဆေး (ferrous sulfate 200mg/8h PO) ပေးနိုငျပါတယျ။ ဒီ သံဓါတျဆေးတှကေ ပြို့အနျခွငျး၊ ဝမျးခြုပျခွငျး၊ ဗိုကျမအီမလညျဖွဈခွငျး၊ ဝမျးအရောငျမညျးခွငျး စတာတှေ ဖွဈစတေတျပါတယျ။ ဟီမိုဂလိုဘငျ ၇% အောကျ ရောကျမှ သို့မဟုတျ သှေးဆုံးရှုံးမှုမြားရငျ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါရှိရငျ သှေးအားနညျး လက်ခဏာပွငျးထနျရငျတော့ သှေးသှငျးကုသဖို့ လိုအပျမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ စားသောက်ပုံအရ သွေးအားနည်းရောဂါကတော်တော်အဖြစ်များပါတယ်။သွေးအားနည်းတယ်ဆိုတာ သွေးထဲက ဟီမိုဂလိုဘင် ပမာဏ နည်းတာကိုခေါ်တာပါ။သွေးအားနည်းရခြင်း အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ဒီထဲကမှ အပေါများဆုံး အကြောင်းရင်းကတော့ သံဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်း(Iron Deficiency Anaemia, IDA)ပါ။ မိန်းမတွေက ယောက်ျားတွေထက် သံဓါတ်ချို့တဲ့ နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ ဘာလို့ဆို သူတို့က လစဉ် ရာသီသွေးဆင်းခြင်းဖြင့် သွေးဆုံးရှုံးမှု ရှိလို့ပါ။
သံဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်း နှင့် သွေးအားနည်းခြင်း ဘယ်လိုဆက်စပ်လဲ?
သွေးနီဥလေးတွေကို ရိုးတွင်းခြင်ဆီကထုတ်ပေးရာမှာ လိုအပ်တဲ့ ကုန်ကြမ်းက Fe လို့ခေါ်တဲ့ သံဓါတ်ပါ။ ဒါ​ကြောင့် သံဓါတ်ချို့တဲ့ရင် သွေးအားနည်းခြင်းဖြစ်စေပါတယ်။ သံဓါတ်ချို့တဲ့လို့ သွေးအားနည်းခြင်း (IDA) ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက-
(၁) Blood loss - ခန္ဓာကိုယ်တ​နေရာရာက​နေ သွေးဆုံးရှုံးတာများခြင်း
-အမျိုးသမီးများတွင် ရာသီသွေးဆင်းတာများခြင်း (menstraution)
-အူလမ်းကြောင်း တလျှောက်မှ အ​ကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သွေးထွက်​ခြင်း (GI bleeding) ဥပမာ- သွေးအန်ခြင်း၊ ဝမ်းမည်းမည်းသွားခြင်း၊ လိပ်ခေါင်း (piles) မှ ဝမ်းထဲသွေးပါခြင်း၊ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ကင်ဆာများ
(၂)Poor diet-အစားအသောက်ချို့တဲ့ခြင်း (အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်တွေမှာ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းနှင့် တွဲတတ်သည်)
-Coeliac disease လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါတမျိုးမှာ တွေ့ရသည်။ သံဓါတ်ပြန်ဖြည့်ပေးသော်လည်း ရေရှည် သံဓါတ်အားနည်းခြင်း နဲ့တွဲတတ်ပါသည်။
(၄)Hookworm လို့ခေါ်တဲ့ သန်ကောင်တမျိုးကြောင့် အူလမ်းကြောင်းမှ သွေးဆုံးရှုံးခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်ထက် ဖြူ ဖျော့နေခြင်း၊ နုံးခြင်း၊ မောခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း ရိပ်ကနဲဖြစ်ခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း စတာတွေနဲ့ တွေ့ရမှာပါ။ လကြာရှည်စွာ သံဓါတ်အားနည်းနေတဲ့သူတွေမှာတော့ အပေါ်မှာပြောတဲ့ သွေးအားနည်းတဲ့ လက္ခဏာတွေအပြင် ​ကြာရှည် သံဓါတ်ချို့တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့-
-လက်သည်း ခြေသည်း ပုံပျက်ခြင်း (Koilonychia)
-နှုတ်ခမ်းထောင့်တွင် အနာဖြစ်ခြင်း (Angular cheilosis)
-လျှာရဲယံရောင်ရမ်းခြင်း (Atrophic glossitis) နှင့်
-လည်ချောင်းတွင် ပိတ်ဆို့ခြင်း အစာနင်ခြင်း ဖြစ်စေတဲ့ post cricoid web ဒါတွေနဲ့လည်း တွဲတွေ့ရမှာပါ။
သင့်မှာ သွေးအားနည်းနေကြောင်း ဘယ်လိုစစ်ဆေးသိနိုင်မလဲ?
Full Blood Count သွေးဆဲလ် ပမာဏ စစ်ကြည့်ခြင်းဖြင့် Hb လို့ခေါ်တဲ့ ဟီမိုဂလိုဘင် % နည်းနေခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေမှာတော့ ဟီမိုဂလိုဘင် ပမာဏ 13.5 g/dL အောက် နဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ 11.5g/dL အောက် ရှိရင် သွေးအားနည်းခြင်း (Anaemia) လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သံဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်းအတွက် Fe study လို့ခေါ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတခု လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်မှာ သံဓါတ်ချို့တဲ့မှုကြောင့် သွေးအားနည်းနေတာ သိတာနဲ့ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ အကြောင်းရင်းတွေသိဖို့ ရှာသင့်ပါတယ်။
-လိပ်ခေါင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
-အူမကြီး မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း (Colonoscopy)
-ဝမ်းစစ်ခြင်း (Stool microscopy for ova) စတာတွေ ရှာသင့်ပါတယ်။
သံဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို အရင်ရှာဖွေကုသရမှာပါ။ သံဓါတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့ကတော့ ပါးစပ်ကနေပဲ သံဓါတ်သောက်ဆေး (ferrous sulfate 200mg/8h PO) ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ သံဓါတ်ဆေးတွေက ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဗိုက်မအီမလည်ဖြစ်ခြင်း၊ ဝမ်းအရောင်မည်းခြင်း စတာတွေ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဟီမိုဂလိုဘင် ၇% အောက် ရောက်မှ သို့မဟုတ် သွေးဆုံးရှုံးမှုများရင် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါရှိရင် သွေးအားနည်း လက္ခဏာပြင်းထန်ရင်တော့ သွေးသွင်းကုသဖို့ လိုအပ်မှာပါ။
【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】အူကခြွငျး အူကြှံခွငျး (Hernias) အ‌ကွောငျးသိကောငျးစရာ
【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】အဆုတျရဝေိုငျးခွငျး (Pleural Effusion)အကွောငျးသိကောငျးစရာ